I-Camburi Beach ngasemva kwendlu yam - I-Airbnb
I-Camburi Beach ngasemva kwendlu yam
Ifakwe phambi kweCamburi Beach, iCentury Plaza yindlu yeendwendwe enendawo ebalaseleyo, amanyathelo nje kude neendawo zokutyela ezilungileyo, iibhari, iikhemesti, iivenkile ezinkulu kunye neevenkile ezinkulu eVitória. Inedama lokuqubha kunye nesauna, kwindlwana entle yokulala enombono wepanoramic yonxweme lonke lwesixeko. Le ndlu sisitudiyo sabucala, sinebhedi ephindwe kabini kunye nebhedi yesofa, i-air conditioning, i-hairdryer, ikhuselekile, umabonakude, i-Wi-Fi kunye nekhitshi elixhotyiswe kancinci.
Ifulethi lesitayile seStudio enebalcony kunye nembonakalo entle yolwandle. Kuye ibhedi kabini, neebhedi esofeni, umoya, umabonwakude, Wi-Fi, idraya yeenwele, itheyibhile okudlela, itheyibhile umsebenzi, ekhuselekileyo elektroniki kunye nekhitshi mini exhotyiswe microwave, ifriji, isitovu electrics eziphathwayo, ikofu, uMenzi, izitya, Stars, iiglasi kunye nezixhobo ezisisiseko. Isakhiwo sijongene nolwandle, kwisitalato esikhuselekileyo, kwaye sine-concierge yeeyure ezingama-24, ii-elevator ezimbini kunye neendawo zokupaka zangasese.
Ifakwe kwindlela ephambili kumda weVitória, le ndlu ikufutshane neendawo zokutyela, iibhari, iibhaka, iikhemesti, iiparlors ze-ice cream, iivenkile ezinkulu kunye norhwebo ngokubanzi. Iindwendwe ziya kuba noluhlu olubanzi lweendlela zokuzonwabisa kunye nezinto eziluncedo kumganyana nje. Ukongeza, ipropathi ijongene neCamburi boardwalk, apho unokubaleka, uhambe okanye urente iibhayisekile. Isakhiwo sibekwe kwisitalato esikhuselekileyo, kwaye sine-concierge yeeyure ezingama-24 kunye nezinyusi ezimbini.
Sikhona kuyo nayiphi na ingxaki okanye umbuzo onokuthi uvele, kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukwenza ukuhlala kwakho kungaphezulu kokugqibelela!